Akwụkwọ edemede Javeria Gauhar na Martech Zone |
Edemede site na Javeria Gauhar
Javeria Gauhar, onye edemede B2B / SaaS nwere ahụmahụ ọkachamara na ederede maka ụlọ ọrụ njikwa data. Na Data Ladder, ọ na-arụ ọrụ dị ka Marketing Executive, na-ahụ maka mmejuputa atumatu inbound ahịa azum. Ọ bụkwa onye mmemme na afọ 2 nwere ahụmịhe n'ịzụlite, ule na ịchekwa ngwa ngwanrọ nke ụlọ ọrụ.
Fraịde, Machị 12, 2021 Fraịde, Machị 12, 2021 Javeria Gauhar
Njikọ dị ọnụ bụ ọrụ dị mkpa maka azụmaahịa azụmaahịa dịka ịre ahịa ozi na ozugbo inweta otu eziokwu. Agbanyeghị, ọtụtụ ụlọ ọrụ kwenyere na usoro mkpocha ahụ bụ naanị usoro na ọrụ Excel na-eme obere ihe iji dozie mkpa dị mgbagwoju anya nke ogo data. Ntuziaka a ga - enyere ndị azụmaahịa na ndị ọrụ IT aka ịghọta usoro mkpocha, ma nwee ike mee ka ha ghọta ihe kpatara ndị otu ha enweghị ike